Luka Modric oo cambaareeyey qaabka ciyaareedka Real madrid. – iftiin fm
Luka Modric oo cambaareeyey qaabka ciyaareedka Real madrid.
October 23, 2020 Iftiin FM Reporter 0 Comment
Laacibka khadka dhexe ee Real Madrid, Luka Modric ayaa ka hadlay bandhiggii liitay ee kooxdiisa ay soo bandhigtay kulankii xalay ee Champions League.
Luka Modric waxa uu xusay in bandhiggii Real Madrid uusan u qalmin in lagala soo muuqdo tartanka Champions League, isagoo sidoo kale tababare Zinedine Zidane ku raacay in kooxda ay kalsooni darro ka muuqatay intii lagu guda jiray kulankii ay guuldarrada 3-2 kala kulmeen Shakhtar Donetsk.
Inkastoo ay Los Blancos horumar samaysay intii lagu jiray qaybtii dambe ee ciyaarta, iskuna dayday in saddex gool oo laga dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta ay ka soo kabsadaan qeybtii labaad, haddana ma dhicin oo waa laga adkaaday, waxaana ay kooxda caasimadda Spain ka dhisan sidaasi ku qaadatay guuldarradii ugu horreeysay kulankoodii ugu horreeyay ee wareegga group-yada Champions League kal ciyaareedkan.
Modric oo shaashadda soo galay waxyar kaddib markii dib loo bilaabay ciyaarta qeybtii labaad ayaa saxaafadda u sheegay ciyaarta kaddib in kooxda caasimadda Spain ka dhisan ee Real qaab ciyaareedka ay soo bandhigtay uusan u qalmin tartanka Koobka horyaallada Yurub.
← Xildhibaanadda laga soo doortay deegaan barlamaaneedka Aisha Jumwa oo la mashquuliyey .
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ka hadlay doroshooyinka . →